2019 – Year – Channel Myanmar
TMDb: 6.9/10 30 votes
Put Your Head on My Shoulder (2019) စစ်ထူမော့ လို့အမည်ရတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးကဘွဲ့ယူဖို့နီးကပ်နေပြီမို့ အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတာပေါ့နည်းလမ်းပေါင်းစုံကို ကြိုးစားနေရင်းနဲ့ပဲ သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို မချနိုင်ခဲ့ဘူး စစ်ထူမော့ရဲ့ဘဝထဲကို ဥာဏ်ကြီးရှင် Physics ကျောင်းသားလေးကူဝေ့ယိ ရောက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူမရဲ့ နေ့ရက်တွေက ရုတ်တရတ်ဆိုသလို ဗြောင်းဆန်သွားခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကြားမှာ အခြေအနေတွေကဗရမ်းဗတာတွေဖြစ်ပြီးတော့ ဘယ်လိုများ ဆက်ဖြစ်ကြမလဲ ??(ဘာသာပြန်ပြီး အညွှန်းရေးပေးထားတာကတော့ Soo Bin ဖြစ်ပါတယ်)စစ်ထူမော့ အဖြစ် Fair Xingကူဝေ့ယိ အဖြစ် Lin Yiရွှီကျဲအာ အဖြစ် Yi Shaရှဲယွီယင်း အဖြစ် Zhou Zi Xin Drama: Put Your Head on My Shoulder Country: China Episodes: 24 Aired: Apr 10, 2019 - May 8, 2019 Aired On: Wednesday, Thursday ...
TMDb: 9.1/10 votes
In The Dark (2019) ဒီဇတ်လမ်းကတော့ မာဖီ ဆိုတဲ့ မျက်မမြင် ကောင်မလေး နဲ့ စရမှာပဲ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်မှာ မျက်လုံးကွယ်ခဲ့ပြီး ဘ၀ ကြီးကို ဖြစ်သလိုနေထိုင်တဲ့ ကောင်မလေး ချောချောလေး တစ်ယောက်ပေါ့ သဘောကျတဲ့ ကောင်လေးတွေ နဲ့ ဒိတ်တယ် တစ်ည အိပ်ပြီးရင် ဘာမှ ဆက်ဖြစ်မလာဘူး ဘယ်ယောင်္ကျားကိုမှ မယုံသလို တစ်ညအိပ်ဖို့ကလွဲရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ အတည်မတွဲတက်သူ ဒါပေမဲ့ သူ ခင်တဲ့သူ တစ်ယောက် ရှိတယ် လမ်းဘေး မှာ ဆေးရောင်းနေတဲ့ လူမဲ ကလေးလေး တစ်ယောက် အဲ့ဒီ ကလေးက မာဖီ ရဲ့ အသက်ကို ကယ်ခဲ့တဲ့ သူ တစ်ရက် မာဖီ လမ်းလျှောက်လာတုန်း ဓါးမြတိုက်ခံရတယ် သေလုမတက် ရိုက်နှပ်သွားပြီး လမ်းပေါ်မှာ လဲ နေခဲ့တယ် လူမဲ ကောင်လေးက တွေ့လို့ ရဲခေါ် ကယ်ဆယ်နိုင်လို့ မာဖီ တစ်ယောက် အသက်ဆက်နိုင်ခဲ့တာပါပဲ မာဖီ အားရင် လူမဲ ကောင်လေး နဲ့ အချိန်ဖြုန်း စကားတွေ ပြောလေ့ ရှိတယ် တစ်ယောက်နဲ့ ခင်မင်မှုတွေ ရှိလာပြီး အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်လာခဲ့တယ်... ဒါပေမဲ့ ...
TMDb: 9.0/10 941 votes
Fairy Gone (2019) s1 ကြီးမြတ်တဲ့စစ်ပွဲကြီးဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာ ရန်သူကို အနိုင်တိုက်ဖို့အတွက် နတ်သူငယ်တွေနဲ့လူသားတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့ စစ်သားတွေကိုအသုံးချခဲ့ပါတယ် စစ်ပွဲကြီးအဆုံးသတ်သွားတော့ နတ်သူငယ်စစ်သည်တွေရဲ့အရေးပါမှုပါ အဆုံးသတ်သွားပါတယ် အစိုးရကလဲ နတ်သူငယ်စစ်သည်တွေကို တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားပါပြီ ဖူရီးက စစ်ပွဲမှာ နတ်သူငယ်စစ်သည်အဖြစ် ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ပွဲပြီးတဲ့အခါ သာမန် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းအဖြစ်နေထိုင်နေသူတစ်ယောက်ပါ တစ်ဖက်မှာလဲဆူနာရွာ ရွာလုံးကျွတ်မျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကနေ လွတ်မြောက်လာတဲ့ မာလေယာကသူမနဲ့အတူ ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ဗယ်ရိုနီကာကိုရှာဖွေနေသူပါ ဗယ်ရိုနီကာကိုရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားရင်း မာလေယာတစ်ယောက် နတ်သူငယ်တစ်ကောင်နဲ့ ပေါင်းစည်းမိသွားတဲ့အခါမှာတော့... Translated by Waizin Wayne Encoded by sithu Episode 1 : Gdrive / Openload / Megaup Episode2: Gdrive / Openload / Megaup Episode3: Gdrive / Openload / Megaup
Fairy Gone (2019) s1
Kill It(2019)Season 1 Kill It(2019) ဇာတ်လမ်းတွဲစ/ဆုံး ဂင်ဆူယွန်းဆိုတဲ့ လူငယ်လေးဟာ ငယ်ငယ်လေးကထဲက ကြေးစားလူသတ်သမားတစ်ဦးရဲ့ပြုစုပျိုးထောင်မှုကြောင့် တိုက်ရည်ခိုက်ရည်မျိုးစုံနဲ့ လူသတ်နည်းမျိုးစုံကို လက်ဆင်ကမ်းအမွေရထားသူဖြစ်တယ်...အဆင့်မြင့်ကြေးစားလူသတ်သမားဖြစ်သူရဲ့ သင်ကြားမှုကြောင့် ပင်ကိုယ်ပါရမီပါတဲ့ ဒီလူငယ်လေးဟာ ဆရာတစ်ဆူလိုပါပဲ.....ပြောရရင်ကြေးစားလူသတ်အသိုင်းအ၀န်းမှာ ကျင်လည်နေတဲ့သူတစ်ယောက်... ဒိုယောင်းဂျင် ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကတော့ စုံထောက်တစ်ယောက်... သူက အမှုသွား အမှုလာတွေကို ချဉ်းကပ်ပုံ ၊စဉ်းစားပုံ၊ဆက်စပ်တွေးတောပုံတွေက အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် ထက်မြက်လွန်းတဲ့သူ....ထူးဆန်းတဲ့လူသေမှုတွေကြောင့် ဂင်ဆူယွန်းတို့ရှိတဲ့ဘက်ကို အမှုလိုက်ဖို့စေလွှတ်ခြင်းခံထားရတဲ့သူ.... ဒီကားက 2019 ခုနှစ်ထွက် ကိုးရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး စုံထောက်မှုခင်း အက်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်... ရုရှားမာဖီးယားဂိုဏ်းတွေလည်းပါသလို မူးယစ်ဂိုဏ်းတွေ မူးယစ်ဆေးတွေ၊အတွဲလိုက် လူသတ်မှုတွေပါဝင်တယ်.. ဖိုက်တင်ခန်းတွေလည်းအတော်ကောင်းသလို လက်နက်မျိုးစုံကိုလည်းသုံးထားတာတွေ့ရတယ်.. မှုခင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဆက်စပ်တွေးခေါ်ပြီး အမှုလိုက်ပုံစံတွေကလည်း တော်တော်လေးကိုပညာသားသလို အပိုင်း(၁)မှာတင် လျှိုဝှက်ချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ ဇာတ်လမ်းကိုစထားတယ်... ကြေးစားလူသတ်သမားဖြစ်တဲ့ ဂင်ဆူယွန် ရဲ့ မိဘတွေက ဘယ်သူဘယ်ဝါလဲမဖော်ပြထားတဲ့အပြင် ရှေးယခင်ကထဲက မဖော်နိုင်သေးတဲ့ အကြီးပိုင်းလူသတ်မှုတွေကလည်း ရှိနေပြန်တယ်... ပြောရရင် ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်ကောင်းသလို အတော်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်... မှုခင်း အက်ရှင်ကားတွေကိုကြိုက်တဲ့သူတွေအဖို့ကြည့်သင့်ပါကြောင်းညွှန်းဆိုပါရစေ... (၁၂)ပိုင်းထွက်ရှိပြီး စ/ဆုံးတင်ဆက်ပေးထားပါသည်... ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ SCRN , Cynthia,May Phyu Zaw နဲ့ May Tharaphi Lwin ပဲဖြစ်ပါတယ်...Quality – 720p WEB-DLDuration – ...
Kill It(2019)Season 1
Love, Death & Robots. 2019 Season-1 (Completed) Love, Death and Robots (2019)သင်ဟာ Animation Crazyတစ်ယောက်လား။Spiderman; Into the Spiderverse ကို အရူးအမူးကြိုက်ခဲ့သူလား။ဒါဆိုရင်တော့ အခု နာမည်ကြီးနေတဲ့ Netflix က လွှင့်တဲ့Love, Death and Robots ဆိုတဲ့ Seriesလေးကို မဖြစ်မနေကြည့်သင့်ပါတယ်။Imdb Rating 9\_10 ရထားတဲ့ Seriesပါ။Series တစ်ပိုင်းလုံးမှာ အပိုင်း ၁၈ ပိုင်း ပါပါတယ်။တစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်းက ဇာတ်လမ်းတစ်မျိုးစီဖြစ်သလို ကြာချိန်တွေလည်း မတူညီကြပါဘူး။ခံစားစေရတဲ့ ရသတွေလည်း မတူညီကြပါဘူး။ဘယ်လိုဇာတ်လမ်းမျိုးတွေပါမလဲဆိုတာကတော့ နာမည်ထဲကအတိုင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ သေဆုံးမှုတွေနဲ့ စက်ရုပ်တွေကိုအခြေခံထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးတွေပါ။တချို့အပိုင်းတွေဆိုရင် Gameဆော့နေရသလိုမျိုး ခံစားချက်ကိုပါ ပေးစေပါတယ်။အရမ်းညွှန်းနေရင် ပေါ့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်တိုင်ပဲခံစားကြည့်လိုက်ကြပါ။Animationဆိုပေမဲ့ အသုံးအနှုန်းအကြမ်းတွေ...
TMDb: 8.2/10 106 votes
Love, Death & Robots. 2019 Season-1 (Completed)
Touch Your Heart (2019) လက်ရှိထွက်ရှိနေတဲ့ ကိုရီးယားစီးရီးအသစ်လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်...My Girl , Goblin Series တွေနဲ့အောင်မြင်မှု့တွေအများဆုံးရထားတဲ့တောင်ကိုရီးယားထိပ်တန်းမင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့Lee Dong-wook ရဲ့ ၂၀၁၉ မှာ ရေပန်းစားနေတဲ့Touch Your Heart စီးရီးဖြစ်ပါတယ်....ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်....မင်းသမီးအိုယွန်ဆိုးဟာ မူးယစ်ဆေးသုံးတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်ကောလာဟလကြောင့်နာမည်ဂုဏ်သတင်း ကျဆင်းသွားတဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်လက်ပါအပြစ်ကင်းမှုကိုသက်သေပြပြီးနောက်မှာလည်း အနုပညာနယ်ပယ်ထဲ ပြန်ဝင်ဖို့ ခက်ခဲနေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအချိန် သူရိုက်ခွင့်ကြုံလာတဲ့ရုပ်ရှင်ကားမှာ သူကရှေ့နေဇာတ်ရုပ်နေရာကသရုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်လို့ သရုပ်ဆောင်မတော်တဲ့ သူ့အနေနဲ့ရှေ့နေရုံးတစ်ခုမှာ လက်တွေ့လေ့လာကြည့်ဖို့ လိုအပ်လာပါတော့တယ်ရှေ့နေကွမ်ဂျွန်ဝူးက အလွန်တော်ပေမယ့် တိတိကျကျရှိပြီးအေးစက်စက်နိုင်လှတဲ့ ရှေ့နေတစ်ဦးပါဒါရိုက်တာရဲ့အမိန့်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်ပဲ မင်းသမီးအိုယွန်ဆိုးကိုသူ့အတွင်းရေးမှူးအနေနဲ့ လက်ခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာ..ကမောက်ကမတွေ စဖြစ်လာပါတော့တယ်အခြေကြီးကြီးရွှေမင်းသမီးနဲ့ မာနထိပ်ခေါင်ရှေ့နေကြီးတို့ကြားကအချစ်ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သာမန်အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုမှ ဟာသနည်းနည်းရောမွှေထားလို့ ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်လာမှာပါ...ဒီဇာတ်ကားကို ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ရက်နေ့ကစပြီးတော့အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဒဟူးနဲ့ ကြာသာပတေးနေ့တိုင်း ...
The Promised Neverland (2019) မိဘမဲ့ဂေဟာတစ်ခုမှာမွေးကတည်းကအတူနေနေရတဲ့ သွေးမတော်သားမစပ်မိသားစုတစ်စု အဲ့အထဲမှာမှဘက်စုံထူးချွန်လွန်းတဲ့ကလေးသုံးယောက်ကတော့ အမ်မာ၊ရေးနဲ့နော်မန်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် မွေးကတည်းကမိဘမဲ့ဂေဟာခြံကြီးထဲမှာပဲနေပြီး အပြင်လောကအကြောင်းကိုစာအုပ်တွေကလွဲရင် ဘာမှမသိပါဘူး ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့အတုံးဆုံးညီမလေးကိုနီတစ်ယောက် မွေးစားခံရတဲ့အချိန်မှာတော့မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အပြင်လောကကအမှန်တရားတချို့ကိုအမ်မာနဲ့နော်မန်တို့ ရှာတွေ့သွားပါတော့တယ် Translated and encoded by sithu Episode 1 : Gdrive / Openload / Megaup Episode2: Gdrive / Openload / Megaup Episode3: Gdrive / Openload / Megaup Episode4: Gdrive / Openload / Megaup Episode5: Gdrive / Openload / Megaup Episode6: Gdrive / Openload / Megaup Episode7: Gdrive / Openload / Megaup Episode 8 : Gdrive / Openload / ...
Kingdom (2019) Season 1 [COMPLETE] အခုလောလောလတ်လတ် ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၅ မှာမှ အသစ်ထွက်လာတဲ့ ကိုရီးယား အက်ရှင်စီးရီးလေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။အွန်လိုင်းကောမစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ "The Kingdom of the Gods" ကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတာပါ။ထုတ်လုပ်သူကတော့ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဇာတ်လမ်းတွဲကောင်းများစွာကို ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Netflix ကပါပဲ။Netflix ကလွှင့်တဲ့ ဒုတိယမြောက် ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပြီး ပထမ Season အနေနဲ့ အပိုင်းခြောက်ပိုင်းပါရှိပါတယ်။အဓိကဇာတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ အိမ်ရှေ့စံ Lee Chang နေရာမှာ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မင်းသား Ju Ji-Hoon ကိုတော့ မသိတဲ့သူမရှိလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဂျိုဆောင်ခေတ်မှာ အိမ်ရှေ့စံမင်းသားက တိုင်းပြည်အတွင်းမှာ ထူးဆန်းတဲ့ ကပ်ရောဂါဆိုး ကျရောက်နေတာကိုစုံစမ်းရင်းအမှန်တကယ်တော့ အဲဒီကပ်ရောဂါဆိုးက လူတွေကို ဇွန်ဘီတွေဖြစ်သွားနိုင်စေတယ်ဆိုတာ သိလာရပါတယ်။သူအဲဒီကပ်ရောဂါဆိုးကနေ သူ့ရဲ့နိုင်ငံကို ကယ်တင်နိုင်ပါမလား။အိမ်ရှေ့စံဖြစ်တဲ့ ...
Kingdom (2019) Season 1 [COMPLETE]
Sex Education (2018) အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတွေအတွက်တော့ဒီစီးရီကပုံမှန်18+အခန်းတွေအများကြီးပါတဲ့ဟာသစီးရီးတစ်ခုပါပဲ ဒါပေမယ့်အခုချိန်ထိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုသေချာရေရေရာရာမသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်တော့ လိင်ပညာပေးစာအုပ်၁၀အုပ်လောက်နဲ့ညီသွားနိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့နုိင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာအရလိင်ကိစ္စဟာ ဂုဏ်ယူစရာကိစ္စမဟုတ်သလိုစူးစမ်းသင့်တဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ပါဘူး အဲ့အတွက်ကြောင့်safe sexကိုတောင်သေချာမသိလို့ပြသနာတက်နေကြတာတွေလည်း အခုထိရှိပါသေးတယ် သူတို့နိုင်ငံကဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့sex lifeကရော ဘယ်လိုမျိုးလဲ ပြီးတော့ဆယ်ကျော်သက်တွေအဓိကပြသနာတွေကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတာဒီစီးရီးမှာအကုန်မြင်နိုင်ပါတယ် ဟာသစီးရီးဖြစ်တာကြောင့်ပျင်းဖို့လည်းလုံးဝမကောင်းတဲ့အပြင်တက်သစ်စသရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ ပီပြင်မှုတွေကစီးရီးတစ်ခုလုံးကိုပြည့်စုံနေစေပါတယ် ဇာတ်လမ်းပုံစံကတော့ အိုတစ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလို့မရပါဘူး သူရဲ့အမေကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေးဖြစ်ပြီးသူ့နေ့စဉ်ဘ၀ကိုအဲ့အရာကအတော်သက်ရောက်နေပါတယ် မမျှော်လင့်ပဲသူတို့ကျောင်းကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဘောကြီးချင်လို့ecee2သုံးလုံးသောက်မိပြီး အဆမတန်ကြီးသွားတာကိုမေ့ဖ်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးနဲ့အတူတွေ့သွားပါတော့တယ် ဘာလို့သောက်မိလဲဆိုတာကိုပြန်ရှင်းပြတဲ့အခါမှာတော့သုတ်မလွှတ်နိုင်တဲ့ပြသနာရှိနေကြောင်း ဆေးသောက်လိုက်ရင်သုတ်လွှတ်နိုင်မယ့်ထင်လို့သောက်မိကြောင်းပြောပြပါတော့တယ် အိုတစ်ဟာသူ့အမေရဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံကိုနေ့တိုင်းကြားပြီးအဲ့ကောင်လေးကိုစကားပြောပေးပါတယ် ပါလာတဲ့ပါရမီကြောင့်ပဲပြောရမလားမသိပေမယ့်သုတ်လွှတ်နိုင်သွားပါတယ် မေ့ဖ်ဟာအဲ့ပါရမီကိုသတိထားမိပြီးသူတို့နှစ်ယောက်စပ်တူလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်ပါတော့တယ် အဲ့တာကတော့SEX EDUCATIONပါပဲ ဘာသာပြန်တွေကတော့ Shwe Yee Oo,Wai Zin,Linn Kyaw Swar Aung,Hein Thet Naingတို့ပဲဖြစ်ပါတယ် encodeပေးထားတာတော့sithuပါ Episode 1 : Gdrive / Openload / Megaup Episode2: Gdrive / Openlaod / Megaup Episode3: Gdrive / Openload / Megaup Episode4: Gdrive / Openload / Megaup Episode5: Gdrive / Openload / Megaup Episode6: Gdrive / Openload / Megaup Episode7: Gdrive ...
TMDb: 8.5/10 14 votes
Sex Education (2018)
The Crowned Clown (2019) ဒီကားဟာ အရင်က လီဗြောင်ဟွန်းနဲ့ Masquerate ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားအဖြစ်ရိုက်ဖူးပါတယ် အခု Asian Brother လို့အခေါ်ခံရတဲ့ ယိုးဂျင်ဂူးနဲ့ စီးရီးအဖြစ်ပြန်ရိုက်တာပါ လီဗြောင်ဟွန်းကားကြည့်ပြီးငိုခဲ့ရတဲ့သူတွေက ဒီကောင်လေးလုပ်နိုင်ပါ့မလားဆိုပြီးစိုးရိမ်ကြမှာပါ ကိုယ်လဲစိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် သူကလဲ သူ့အသက်အရွယ်နဲ့သူ အကောင်းဆုံးလုပ်ပြသွားနိုင်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကိုပြောရရင်တော့ ဘုရင်ဖြစ်လာချင်လို့ အဖေကိုရော ညီတွေရော အကုန်လုံးကိုသတ်ပြီး ဘုရင်ဖြစ်လာတဲ့ဘုရင်ငယ်ငယ်လေးဟာ ဘေးက အာဏာလိုချင်တဲ့အမတ်တွေရဲ့ တွန်းပို့မှုနဲ့ ဆေးစွဲနေပြီး စိတ်ဂယောက်ဂယက်ဖြစ်လာနေပါတယ် သူ့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့ အနီးကပ်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့သူတွေကြောင့်သာ ခံသာသေးတယ်ပြောရမှာပါ သူဘယ်လိုမှမခံနိုင်တော့လို့ နန်းတွင်းက ထွက်ဖို့ကြံတဲ့အခါ နန်းတော်ထဲမှာ ထားခဲ့လို့ရမယ့် သူနဲ့ရုပ်ချင်းတူတဲ့တစ်ယောက်ကိုရှာတွေ့သွားပါတယ် အဲ့နောက်မှာဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲကတော့ ကိုယ့်ဘာသာပဲဆက်ကြည့်လိုက်ပါနော် ဇတ်လမ်းတွဲကို ဘာသာပြန်ပေးထားတာကတော့ ThinZar Htet ဖြစ်ပါတယ် The Crowned Clown ကို အပတ်စဉ် အင်္ဂါနေ့ နဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တွေမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် E01 - Drive / Solidrive / Openload (600MB) 720P E02 - Drive / Solidrive / Openload (600MB) 720P E03 - Drive / Solidrive / Openload (600MB) 720P E04 - Drive / Solidrive / Openload (600MB) 720P